Wasiirka Dalxiiska ee Seychelles ayaa sahamiyay xarumo yaryar oo ku yaal Bel Ombre oo ku taal Mahé
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Wasiirka Dalxiiska ee Seychelles ayaa sahamiyay xarumo yaryar oo ku yaal Bel Ombre oo ku taal Mahé
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Seychelles oo booqday Bel Ombre ee Mahe.
Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha hoyga dalxiiska ee yaryar ayaa soo bandhigaya alaab tayo sare leh, iyagoo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta waxayna ku shaqeeyaan heerar 5-star ah, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Mr. Sylvestre Radegonde, ayaa sheegay Jimcihii, Ogosto 26, 2021, intii uu ku guda jiray booqashada xarumo yaryar oo ku yaal Bel Ombre.
Wasiirka ayaa Jimcihii booqday 15 xarumood oo yaryar, isagoo wada -hadallo la yeeshay milkiilaha/maareeyayaasha iyo shaqaalaha.
Waxa uu gacanta ku maqlay caqabadaha ay la kulmaan wuxuuna kula taliyay fursadaha ay heli karaan.
Wasiir Radegonde waxaa booqashooyinkiisa ku weheliyay Xoghayaha Maamulaha Dalxiiska, Sherin Francis.
Isagoo sii wata ujeeddadiisa ah inuu si fiican u fahmo warshadaha dalxiiska iyo ciyaartoydeeda, wasiirku wuxuu Jimcihii booqday 15 xarumood oo yar yar, isagoo wada-hadallo la yeeshay milkiilaha/maareeyayaasha iyo shaqaalahooda isla markaana dhegeystay dhegeysiga caqabadaha ay la kulmaan isagoo kula taliyay fursadaha ay heli karaan . Booqashada xarumahan yar -yar aad bay muhiim u tahay maadaama ay u baahan yihiin taageero ka badan kuwa waaweyn oo ay xambaarsan yihiin jilicsanaanta dabaysha oo inta badan lagu lumiyo silsiladaha waaweyn iyo meelaha lagu nasto, ayuu yiri Wasiir Radegonde.
Soo dhaweynta Creole waa sifo la qiimeeyo iyo astaanta jilayaasha yaryar ee ku jira warshadaha dalxiiska, ayuu yidhi. Xushmeeyay badan oo booqda Seychelles, tani waa wax ay booqdayaashu marka hore la kulmaan martigaliyayaashooda xarumo yar yar oo sameeya dhaqdhaqaaqyo yaryar, ha ahaato inay ku salaamayso cabitaanno maxalli ah ama ku daaweyneyso cunto guriga lagu kariyey, taas oo qaar badan oo iyaga ka mid ahi is arkaan waxay ogaadaan dhadhanka qalaad ee cunnada cunnada.
Wasiir Radegonde waxaa ku weheliyay booqashadiisa La Maison Hibiscus, Guriga Fasaxa ee Cove, Cottages Beach, Beach Cove, The Drake Sea Side Apartment, Surfers Cove, Treasure Cove, Daniella's Bungalow, Casadani, Villa Rousseau, Forest Lodge, Le Chant de Merle , Bamboo River Lodge, The Palm Seychelles iyo Marie Laure Suites oo uu qoray Xog -hayaha Guud ee Dalxiiska, Sherin Francis, iyo sidoo kale Xildhibaanka la doortay ee Golaha Qaranka ee Bel Ombre, Mudane Sandy Arissol.
Ogosto waxay ahayd bil mashquul ah inta badan xarumo la booqday, iyada oo dad badani ay xaqiijinayaan in ballansashada ay sii kordhayso tan iyo wejigii ugu dambeeyay ee dib-u-furista dalka bishii Maarso ee la soo dhaafay.
Iyaga oo ka hadlaya sida ay ula qabsadeen xaaladda, marka la eego dabada ay warshadu gashay, waxay iftiimiyeen in ay u jeesteen dalxiiska gudaha oo qayb ka ahaa in albaabadoodu furnaadaan.
Markii baajinta booqashooyinka caalamiga ahi ay soo noqnoqdaan, milkiilayaasha aasaaska ayaa sheegaya inay qaateen qaab dabacsan oo keenaya saami -qeybsiga, martida qaarkood waxay dib u dhigaan joogitaankooda halkii ay gabi ahaanba baajin lahaayeen.
In kasta oo qaar badan oo ka mid ah dhismayaasha hoyga dalxiiska ay marti ka helayaan suuqyada isha ee soo baxaya, haddana waxaa jira faro ku tiris ah oo weli ku tiirsan kuwii hore. Wasiir Radegonde wuxuu xusuusiyey inay u baahan yihiin inay ku dhiiradaan suuqyada leh kartida, sida Bariga Yurub iyo UAE, oo ay dib -u -eegaan xeeladaha suuq -geynta si ay u noolaadaan, taas oo la samayn karo iyada oo ay hoggaaminayso Waaxda Dalxiiska.
La'aanta shaqaale la isku halleyn karo waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn, ayay yiraahdeen, iyadoo inta badan milkiilayaashu ay xaqiijinayaan inay isku dayaan intii karaankooda ah si ay u sii wataan xoogsatada Seychelles. In kasta oo qaarkood ay ku guuleysteen dadaalkan, qaar badan ayaa sheegay in qaar ka mid ah shaqaalaha maxalliga ah aysan u heellanayn warshadaha oo aysan doonayn inay geliyaan waqtiga iyo dadaalka loo baahan yahay. Mr. Loizeau oo reer Casadani ah ayaa tilmaamay in shaqaalaha maxalliga ahi mar walba la doorbidayo, hase yeeshee, marka dadka aan shaqaalaha ahayn laga saaro dadkeenna, kuwaas oo kala ah carruur, waayeel, kuwa aan shaqayn karin iyo kuwa diida, waxaa jira doorasho aad u yar oo mar uun, waa inay shaqo ka raadsadaan dibadda.
Samaynta waxqabadyo badan oo loo heli karo dalxiisayaasha goobta loo socdo ayaa sidoo kale ahayd mawduuc laga dooday, milkiileyaal badan oo aasaasayaal ah oo hela martidooda oo raadinaya waxyaalo ay qabtaan, arrintaas oo uu wasiir Radegonde ka jawaabay, isagoo ku celceliyey in la samaynayo shaqo sidii wax looga beddeli lahaa maadaama aysan wax booqdayaashu wax ay sameeyaan laakiin waxay kaloo sababaan in ay sii dheeraadaan meesha loo socdo iyo kordhinta kharashaadka, oo dakhli soo geliya dalka.
Walaacyada kale ee laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa buuqa buuqa, wasakhowga, qashin -qubka iyo yareynta marin -u -helka xeebta sababo la xiriira horumarrada qaarkood.
In kasta oo ay jiraan caqabadahaas, hay'aduhu waxay lahaayeen jawaab -celin aad u wanaagsan, iyada oo milkiileyaal badan ay xaqiijiyeen in waddanku furmay waqtigii ku habboonaa, siinaayey fursad ay ku badbaadaan. Meesha loo socdo ayaa la furayaa ka hor inta kuwo kale oo badan aysan siinin tartan, PS Francis ayaa ka jawaabay, tallaabooyinka macquulka ah ee dalka ayaa fududeeyay oo soo jiitay dadka si ay u safraan maaddaama waddanku uu ka helo martida xitaa ilaa Alaska.
Isaga oo ka hadlaya booqashooyinka, mudane Arissol wuxuu sheegay inuu u arkay inay yihiin kuwo midho dhal ah maadaama ay ku hawlan yihiin is-dhexgal xiiso leh milkiilayaasha aasaaska, iyagoo wax badan ka bartay xaaladdooda iyo tabashooyinkooda, oo ay ku jireen arrimo la xiriira GOP iyo shaqaale aan la isku hallayn karin. Waxa kale oo uu heshiis la ahaa Mr Rousseau oo ka tirsan Forest Lodge, kaas oo sheegay in barnaamijka tacliinta dalxiiska ee Seychelles uu asaas u yahay warshadaha iyo in ardaydu u baahan yihiin inay fahmaan in ay jirto nolol hoteel oo badan taas oo u baahan una baahan hurdo iyo sidoo kale xamaasad.
Iyaga oo la dhacsan xarumihii ay booqdeen, Wasiir Radegonde iyo PS Francis labaduba waxay faallo ka bixiyeen sida qaar ka mid ah xarumahan yar-yar ay u soo bandhigaan badeecooyin tayo sare leh, iyagoo aad ugu fiirsanaya faahfaahinta kuna hawlgalaya heerar 5-xiddigle ah.
Booqashooyinka toddobaadlaha ah ayaa qayb ka ah dadaallada Wasiir Radegonde ee xoojinta xiriirka uu la leeyahay jilayaasha ka tirsan warshadaha dalxiiska ee maxalliga ah taas oo u sahli doonta shaqadiisa wax ka qabashada caqabadaha soo waajahay warshadaha ee hoos yimaadda faylashiisa.